वैज्ञानिक युगमा पनि धर्म संस्कृतिको हुदैछ खाँचो
सोमवार, सेप्टेम्बर 21, 2020
सेप्टेम्बर 6, 2019 सेप्टेम्बर 6, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment	डा. राम बहादुर बोहरा, धर्म संस्कृति, वैज्ञानिक
धर्म संस्कृति भनेको पहिचान हो । धर्मलाई जात जातिमा लगेर मिसाउनु हुदैन । यसले बैमनस्यता पैदा गराउदछ । धर्म संस्कृतिले काटमार गर भनेको छैन केहि बदमास पुजारीले मासु खानको लागी काटमार गरेको मात्र हो । हिन्दू धर्म सवैभन्दा उच्च स्थानमा देखिन्छ ।
यो धर्मले अरू धर्म मान्नेलाई समेत मिसाउन सक्छ । विश्वका अन्य धर्मालम्वीहरूले समेत रुचाएको धर्म भनेको हिन्दू धर्म रहेछ भन्दा खासै फरक छैन । समय साक्षेप धर्मलाई केहि परिमार्जन गरेर एकल धर्म मान्ने वातावरण मिलाउदा ठिक होला जस्तो मलाई लागेको छ ।
आज हिन्दू धर्मको जड भनेका शिवजी हुन् । शिवलाई अनेकौं रूपमा हामीले मान्ने गरेका छौं । जुनसुकै रूपमा मानौं, सवै एक हुन भन्ने विचार हामीमा जाग्न आवश्यक छ । कसैले ॐ लाई मान्ने गरेका छन् । ॐ को आदि रूप भनेकै शिव हुन भने कसैले अन्य रूपमा मान्ने गरेको हामीले देखिरहेका छौं ।
धर्म संस्कृति जस्तोसुकै रूपमा माने पनि हरेक जातजातिले आफ्नो बाबु-बाजेले माने अनुसार नै मान्ने गरेको हुन्छ । एउटा दलितले माथिल्लो जातको छोरी विवाह गरेपनि त्यो परिवारले स्वीकार गर्दैन तर गुरुङ मगर बाहुनले स्वीकारेको हुन्छ । धर्मले भेदभाव गर भनेको छैन यो तल देखि नै भेदभाव हुदै आएको छ ।
अबको नयाँ पुस्तालाई हामीले नयाँ शिक्षा दिन आवश्यक छ । भगवानले एक परिवारकालाई यसरी जातमा विभाजन गरेका रहेछन् जेठाले वेद पढ्दो रहेछ ब्राह्मण भएछ । माहिलो लड्दो रहेछ क्षेत्री भएछ । साइलोले कपडा सिलाउन थालेकाले दमाई भएछ । कान्छोले फलामका सामाग्री बनाउन खपिस भएकाले बिश्वकर्मा थर हुन पुगेछ ।
कामको भरमा यहाँ जात तोकिएको रहेछ तर हामीले बुझ्न नसक्दा आज जातीय भेदभावमा बाँडिन पुगेको देखिन्छ । समय परिवर्तन भए आज बाहुनले पनि सुन चाँदीको काम गर्न थाले, फलामको काम गर्न थाले । आज काम अनुसारको भेदभाव छैन यसैलाई हामीले परिवर्तन मान्नुपर्छ ।
अबको समय भनेको विज्ञानको समय हो । यो युगमा हामीले अझ धर्म संस्कृति मान्नुपर्छ । नत्र हामी पतनतर्फ उन्मुख हुनेछौं । आफ्नोको परायाको भन्ने छुट्याउन धर्म संस्कृतिले मद्दत गर्नेछ । लोभ लालचबाट बचाउनेछ । तर म भन्ने कुरीति र संस्कारको जड बलियो बनाउन धर्म संस्कृतिले ठूलो मद्दत गर्नेछ ।
नेपालमा हुदैछ धर्म संस्कृति लोप
← स्वास्थ्यको लागि बेथेको साग खानुका फाइदाहरू
शुक्रबार यसरी महाकालीको पूजा गरेमा मिल्नेछ यस्तो लाभ →
NTC को नेटवर्क नहुँदा NCEll लाई मारामार फाइदा
सेप्टेम्बर 27, 2019 सेप्टेम्बर 27, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0
सेप्टेम्बर 13, 2019 सेप्टेम्बर 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1
नोभेम्बर 7, 2018 नोभेम्बर 7, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2
One thought on “वैज्ञानिक युगमा पनि धर्म संस्कृतिको हुदैछ खाँचो”
Pingback:	होशियार ! ख्याल गरौ पाप नगर मर्ने बेला सास नगएर तड्पनु पर्ला है
जनमत सर्वेक्षण – भारतले धेरै समयपछि बल्ल आएर नेपालको संविधानलाई स्वीकार्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?
यस्तो छ शुक्रबार व्रतविधि
श्वास गन्हाउने समस्या र यसको घरेलु उपचार